Somali » Ganacsiga » adeegyada » Value added Service » Adeegga Ilawadaag
Adeegga Ilawadaag, wuxuu macaamiisha Hormuud u sahlayaa in ay wacaan asxaabtooda iyo ehelladooda, iyo cid kasta oo ay dan ka dhaxeyso iyadoo aanay wax lacag ah ugu jirin, lacagtaasna lagu dallaco qofka la wacayo. Faa’iidooyinka adeeggan waxaa ka mid ah:
In aad mar walba ku xirnaatid eheladaada iyo asxaabtaada adiga
In aad taleefankaa isticmaali kartid hadii aysan kuugu jirin wax lacag ah
In aanan wax lacag ah lagaa rabin marka aad isticmaalaysid adeeggan.
Yaa furan kara adeegga ila wadaag?
Waxaa adeegga iIawadaag furan kara oo isticmaali kara dhammaan macaamiisha isticmaasha adeegga prepaid-ka shirkadda isgaarsiinta Hormuud, furashada adeegga waa lacag la’aan. Macaamiisha Postpaid-ka Ma furan karaan adeeggan.
Sida loo furto adeegga Ilawadaag
Garaac*111# kadib dooro 1
Sida sida la isaga xiro adeegga Ilawadaag
Garaac*111# kadib dooro 2
Ka hormari lambarka aad waceyso 111 tusaale: 111618733333